Oge Silurian: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Network Meteorology
N'ime oge Paleozoic anyị na-ahụ oge nke oke ọrụ banyere ala na nke dị n'etiti Ordovician na Onyinye. Ọ bụ maka oge Silurian. N'oge a nke enwere oke ihe omumu banyere ala anyi nwere ike ichota ihe omuma sayensi banyere nhazi oke ugwu di iche iche dika ndi ohuru a maara dika Euramérica.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa nke oge Silurian.
2 Oge oge Silurian
3 Ọnọdụ ihu igwe Silurian
Oge Silurian dị ihe dị ka nde afọ 25, malite n’ihe dị ka nde 444 afọ gara aga ruo ihe dị ka nde 419 afọ gara aga. N'oge a, ọ bụ ihe dị mma na ọ ga-adị na mmiri mmiri na-emighị emi n'elu kọntinent n'ihi na oke osimiri dị elu. Nye ndị ọkà mmụta sayensị, oge Silurian na-atọ ụtọ nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ gbanwere ma na mbara ala ma n'ogo nke ihe dịgasị iche iche
Osisi jisiri ike merie gburugburu ala na ụdị okike ọhụrụ, coral na azụ pụtara. N ala onodu uzo ozo, enwere ike ihu uzo nke otutu ugwu nke anyi ma taa dika Ugwu Appalachian.
Oge oge Silurian
N'oge a, nnukwu kọntinent a na-akpọ Gondwana dị na ọdụ ndịda nke ụwa. Ndị ọzọ nke nnukwu mba a maara dị ka Laurentia, Baltic na Siberia nọ n'ọnọdụ dị n'ihu n'ebe ugwu. Oke osimiri ahụ arịgoro nke ukwuu n'ihi agbaze nke ice site na ngwụcha ngwụcha oge gara aga. Nke a na ịrị elu na oke osimiri O mere ka akuku mmiri a na akpo epicontinental di n’elu ala ndi supercontinent. Ndị a bụ obere mmiri na-emighị emi nke na-agbasa n'akụkụ nile nke kọntinent ndị a.
Mmetụta nke Mgbagharị kọntinent ọ gara n'ihu ịgbanwee kọntinent ahụ. Otu a ka ndị oke ala a na-akpọ Laurentia, Baltica na Avalonia si bịa kụọ na-etolite nnukwu mbara ala aha ya bụ Euramérica.
Ejiri oge a site na ntoputa nke otutu ala. Oké osimiri dị ugbu a bụ Panthalassa, Paleo Tethys, Rheico, Lapetus na oké osimiri Ural.
Ọnọdụ ihu igwe Silurian
N’oge a nile, mbara igwe kwụrụ chịm. E nwekwaghị ọtụtụ mgbanwe mberede na ihu igwe na ọkwa ụwa. Karịsịa nke Silurian ahụ pụtara maka ịbụ oge nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ. Igwe mmiri kpụrụ n'oge Ordovician dị n'akụkụ ebe ndịda nke mbara ala na nsonaazụ ha mere ka ịrị elu na oke osimiri.
Ọ bụ ezie na ọ bụ oge na-ekpo ọkụ n'ozuzu ya, e nwere ndekọ ndị na-egosi na ọ bụ oge nwere oke ifufe ole na ole. Ka oge na-aga, ihu igwe gburugburu ụwa malitere ịbelata, na-eme ka gburugburu ebe obibi dịtụ ntakịrị. Mbelata ọnọdụ okpomọkụ a emeghị ka akpụrụ akpụ. Na ngwụcha nke Silurian ma banyeworị na Devonian ihu igwe na-adịwanye mmiri ma na-ekpo ọkụ na ọnụọgụ dị ịrịba ama nke ọdịda.
N'agbanyeghị eziokwu na ngwụcha nke Ordovician enwere oke mbibi, n'oge ndụ Silurian na-etolite n'ụzọ gara nke ọma na gburugburu ebe obibi mmiri, ọkachasị. Thedị nile nke jisiri ike dịrị ndụ na njedebe nke Ordovician nwere ike ịgbasa na ọbụna wee ghọọ ụdị dị iche iche.
Ka anyị buru ụzọ tụlee ihe ọkụkụ ahụ. N'ime ohia mmiri, enwere otutu algae, karia nke ndu, nke nyere aka iweta nguzozi na gburugburu ebe obibi. Nke a bụ n'ihi na ha bụ akụkụ nke agbụ ndị na-eto eto. N'oge a cVaskụla osisi malitere ịzụlite nke nwere arịa nwere ntụ bụ́ xylem na phloem.
Ná mmalite oge a, ọdịdị ala dị nnọọ iche na nke mmiri. Na gburugburu mmiri, ndụ mepụtara ma dị iche iche. N’aka ozo, na ebe obibi nile nke ala ya, nkpuru akwu kariri ma buru oke nku. Enwere ala ugwu ole na ole na ala ịkpa na humus site n'oge ruo n'oge. Osisi ndi etolite na mbara ala choro ka ha no na aru mmiri. Nke a bụ otu ha si nweta ihe ndị a na nri ndị dị. Nke a bụ otú e si emepụta osisi mbụ anyị maara taa dị ka bryophytes.
Banyere ụmụ anụmanụ, na njedebe nke Ordovician enwere mkpochapu oke nke metụtara ụmụ anụmanụ. Agbanyeghị, n'ime oge a niile, otu anụmanụ dị iche iche dịka arthropods malitere. Site na oge a ka ha gbakee ihe dị ka okike 425 na-anọchite anya ndị nke phylum a. Ihe obi uto na-ebelata n'oge gara aga ma nọgide na-adị na mbara igwe. Mana, n’ogbe ahụ, ha lara n’iyi.
N'otu aka ahụ, n'oge Silurian ha pụtara na nke mbụ ya na myriapods na chelicerates. Ìgwè anụmanụ ndị a malitere imepụta ebe obibi ụwa. Otu ìgwè nke mollusks nọchiri anya oge a site na ụdị nke bivalves na gastropods. Ha kacha biri n’elu mmiri.
The crinoids, nke a ghọtara dị ka ndị kasị ochie echinoderms na mbara ala dị ka ha dịkwa n'oge a. ndị a nwere peduncle nke nyeere ha aka ịwụnye na mkpụrụ. Ha lara n'iyi na njedebe nke Silurian.
Na ubi nke azụ anyị nwere nnukwu iche iche. N'oge gara aga, ostracoderms apụtaworị. Ndị a bụ azụ na-enweghị agba a na-ewere dị ka akwụkwọ akụkọ kacha ochie na ndekọ fosil. Ofdị azụ ndị ọzọ malitere ịpụta, n'etiti ha ndị nwere agba na-akpọ placoderms pụtara. Otu n'ime njirimara ndị nnọchianya nke ụdị a bụ nke ahụ Ha nwere nkpuru ihu n’ahu. Fọdụ ndị ọkachamara na-ekwusi ike na na njedebe nke oge a, cartilaginous azụ na-apụta.
Osimiri Coral nwekwara nnukwu mkpa ebe ọ bụ na ọ pụtara n'oge a. Ọ bụ ebe a ka e guzobere nnukwu nkume coral n'ezie. Nke a bụ n'ihi ụdị ụdị coral dị ugbu a nwere ike ịdị iche iche wee nyocha ya maka radieshon na-agbanwe agbanwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Silurian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Silurian
Amaghị m na ịdị adị nke Oge a. I meela nke ukwuu maka ozi zuru ezu banyere ya. Mmakụ
Zaghachi Rodolfo Antonio Caravaca Pazos
Craters na ọnwa